The Ab Presents Nepal » ओलीले माफी मागे नियत कि भूलवस त्यसो गरियो छानविन हुन्छ!
ओलीले माफी मागे नियत कि भूलवस त्यसो गरियो छानविन हुन्छ!
काठमाडौं-: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली जनतासामु पहिलो पटक सार्वजनिक रुपमै माफी मागेका छन् । विषादी प्रकरणमा उनले माफी मागेका हुन् । उनले आफूलाई पनि झुक्याइएको भन्दै नियतवस वा भुलवस त्यसो गरियो ? छानविन थालेको बताएका छन् ।
भारतीय दूतावासबाट आएको पत्रबारे आफूलाई बेलैमा जानकारी नगराइएको कारण आफू नेपाली जनतासामु लज्जित हुनुपरेको भन्दै त्यसका उनले माफी मागेका हुन् । भारतीय दूतावासले पठाएको पत्रबारे जानकारी नभएकै कारण सार्वजजिनक रुपमा कुनै पत्र नआएको बताउँदा लज्जित हुनुपरेको उनले बताए ।
उनले भने भारतबाट पत्र आएको रहेछ । तर मैले सार्वजनिक रुपमै आएको छैन भने । त्यस्तो बेला कूटनीतिक प्रयास हुनुपर्छ तर मलाई जानकारी नै दिइएन ।
जसका कारण आफू लज्जित हुनुपर्यो, क्षमाप्रार्थी छु | राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने नेपाली जनताको भान्सामा विषादी हुन दिनुहुन्न भन्ने आफू नै पहिलो प्रधानमन्त्री भएको दावी गरे । तर आफूविरुद्ध भ्रम छर्न खोजिएको तर सफल हुन नदिने उनले बताए ।
प्रकाशित मिति July 11, 2019